Iibhodi zesekethe ezili-10 zomaleko we-PDA mveliso kunye nabenzi | Ipandawill
Ixabiso FOB: I-US $ 0.85 / isiqwenga
Maleko Maleko 10
Ubukhulu beBhodi 1.20MM
Ubungakanani bePaneli 300 * 280MM / 2 iiPC
Izinto eziphathekayo I-Shengyi S1000-2 (TG≥170 ℃) FR-4
Umphezulu Gqiba ukuntywiliselwa kwegolide (ENIG)
Ukungqinisisa Ukulungiswa okukodwa kunye nokungafani okungafaniyo
Umgangatho wento 6
Ukusetyenziswa I-PDA eneerhabaxa
Kweli candelo, singathanda ukukunikezela ngeenkcukacha ezisisiseko malunga nokhetho lolwakhiwo, ukunyamezelana, izixhobo kunye nezikhokelo zobeko lweebhodi ezininzi. Oku kufanele ukuba kubenze ubomi bakho bube lula njengomphuhlisi kwaye kuncede ekuyileni iibhodi zesekethe eziprintiweyo ukuze zilungiselelwe ukuvelisa ngexabiso eliphantsi.
Umgangatho Eyodwa **
Ubuninzi besayizi yesekethe 508mm X 610mm (20 ″ X 24 ″) ---
Inani leengqimba ukuya kuma-28 Ngesicelo
Ukucofa ubukhulu 0.4 mm - 4.0mm Ngesicelo
Njengomboneleli ngetekhnoloji yePCB eyahlukeneyo, ivolumu, ukhetho lwexesha elikhokelayo, sinokukhetha izinto ezisemgangathweni ekuya kuthi kugqunywe ngazo ibhendi enkulu yeentlobo zePCB ezihlala zikhona endlwini.
Iimfuno zezinye okanye izinto ezizodwa zinokufezekiswa kwiimeko ezininzi, kodwa, kuxhomekeke kwiimfuno ezichanekileyo, ukuya kuthi ga kwiintsuku zokusebenza ezili-10 kunokufuneka ukufumana loo nto.
Qhagamshelana nathi kwaye uxoxe ngeemfuno zakho kunye nomnye weentengiso zethu okanye iqela leCAM.
Izinto ezisemgangathweni ezigcinwe kwisitokhwe:
Izixhobo Ukutyeba Ukunyamezelana Uhlobo aluka
Maleko yangaphakathi I-0,05mm +/- 10% 106
Maleko yangaphakathi Ubungakanani: +/- 10% 2116
Maleko yangaphakathi 0,13mm +/- 10% 1504
Maleko yangaphakathi I-0,15mm +/- 10% 1501
Maleko yangaphakathi 0.20mm +/- 10% 7628
Maleko yangaphakathi I-0,25mm +/- 10% 2 x 1504
Maleko yangaphakathi 0.30mm +/- 10% 2 x 1501
Maleko yangaphakathi 0.36mm +/- 10% 2 x 7628
Maleko yangaphakathi I-0,41mm +/- 10% 2 x 7628
Maleko yangaphakathi I-0,51mm +/- 10% 3 x 7628/2116
Maleko yangaphakathi I-0,61mm +/- 10% 3 x 7628
Maleko yangaphakathi 0.71mm +/- 10% 4 x 7628
Maleko yangaphakathi I-0,80mm +/- 10% 4 x 7628/1080
Maleko yangaphakathi 1,0mm +/- 10% 5 x7628 / 2116
Maleko yangaphakathi 1,2mm +/- 10% 6 x7628 / 2116
Maleko yangaphakathi 1,55mm +/- 10% 8 x7628
Ukuzilungiselela 0.058mm * Kuxhomekeka kubeko 106
Ukuzilungiselela 0.084mm * Kuxhomekeka kubeko 1080
Ukuzilungiselela Ubungakanani: Kuxhomekeka kubeko 2116
Ukuzilungiselela 0.205mm * Kuxhomekeka kubeko 7628
Ubukhulu beCu kulungelelwaniso lwangaphakathi: Imigangatho eyi-18µm kunye ne-35 µm,
ngesicelo 70 µm, 105µm kunye ne-140µm
I-Tg: malunga. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
εr kwi-1 MHz: ≤5,4 (ngesiqhelo: 4,7) Okungakumbi kuyafumaneka xa kuceliwe
Ukufakwa kwe-PCB yinto ebalulekileyo ekumiseleni ukusebenza kwe-EMC kwimveliso. Ukuqokelelwa okuhle kunokuba luncedo kakhulu ekunciphiseni imitha kwii-loops ezikwi-PCB, kunye neentambo eziqhotyoshelwe ebhodini.
Izinto ezine zibalulekile ngokubhekisele kwibhodi yokuqokelela izinto:
1. Inani leengqimba,
2. Inani kunye neentlobo zeenqwelomoya (amandla kunye / okanye umhlaba) osetyenzisiweyo,
3. Uku-odola okanye ulandelelwano lweengqimba, kunye
4. Ukuqelelana phakathi kweengqimba.
Ngokwesiqhelo alunikwa ngqwalaselo ingako ngaphandle kwenani leendidi. Kwiimeko ezininzi ezinye izinto ezintathu zibaluleke ngokulinganayo. Ukuthatha isigqibo ngenani leelayi, oku kulandelayo kufanele kuqwalaselwe:
1. Inani lemiqondiso emayihanjiswe kunye nexabiso,
3. Ngaba imveliso kuya kufuneka ihlangabeze iimfuno zokukhupha zodidi A?
Rhoqo kuthathelwa ingqalelo into yokuqala. Ngokwenyani zonke izinto zibaluleke kakhulu kwaye kufuneka ziqwalaselwe ngokulinganayo. Ukuba uyilo olulungileyo luya kufezekiswa kwelona xabiso lisezantsi kunye nexabiso eliphantsi, into yokugqibela inokubaluleka ngakumbi kwaye ayifanelanga ukungahoywa.
Lo mhlathi ungasentla akufuneki uthathwe ngokuba uthetha ukuba awungekhe wenze uyilo lwe-EMC elungileyo kwibhodi enamacala amane okanye amathandathu, kuba unako. Ibonisa kuphela ukuba zonke iinjongo azinakho ukufezekiswa ngaxeshanye kwaye ulungelelwaniso luya kufuneka. Kuba zonke iinjongo ze-EMC ezinqwenelekayo zinokuhlangatyezwa ngebhodi enemigangatho esibhozo, akukho sizathu sokusebenzisa ngaphezulu kweebhozo ezisibhozo ngaphandle kokufumana imiqolo yokuhamba komqondiso.
Umgangatho wokuntywila ngokudibanisa ii-PCB ze-multilayer yi-1.55mm. Nayi eminye imizekelo ye-multilayer PCB stack.
Isinyithi Inkcitho I-PCB
Ibhodi yesekethe eprintiweyo yesinyithi (i-MCPCB), okanye i-PCB eshushu, luhlobo lwe-PCB enesixhobo sesinyithi njengesiseko sayo sesahlulo sobushushu ebhodini. Injongo yesiseko se-MCPCB kukuhambisa kwakhona ubushushu kude nezinto zebhodi ebalulekileyo kunye neendawo ezingabalulekanga kangako njengokuxhaswa kwe-heatsink yesinyithi okanye isiseko sesinyithi. Isiseko sesinyithi kwi-MCPCB sisetyenziswa njengenye yeebhodi ze-FR4 okanye ze-CEM3.
Metal Core PCB Izinto kunye Ukutyeba
Isiseko sesinyithi se-PCB eshushu sinokuba yi-aluminium (i-aluminium engundoqo ye-PCB), ubhedu (i-PCB engundoqo yobhedu okanye i-PCB enzima yobhedu) okanye umxube wee-alloys ezikhethekileyo. Eyona nto ixhaphakileyo yiPCB yealuminium.
Ubunzima beentsimbi zesinyithi kwiipleyiti zesiseko sePCB uqobo zii-30 mil-125 mil, kodwa iipleyiti ezijiyileyo nezicekeceke zinokwenzeka.
Ubungakanani befoyile ye-MCPCB bunokuba yi-1 - 10 oz.
Izinto eziluncedo zeMCPCB
Ii-MCPCB zinokuba luncedo ekusebenziseni ukubanakho ukudibanisa umaleko we-dielectric ye-dielectric nge-conductivity ephezulu yokufudumeza kwe-thermal ukumelana.
Isiseko sePCB sokudlulisa ubushushu amaxesha ama-8 ukuya kwele-9 ngokukhawuleza kunee-PCB ze-FR4. I-MCPCB ilaminates isasaza ubushushu, igcina ubushushu obuvelisa izinto ezipholileyo ezikhokelela ekwenziweni komsebenzi kunye nobomi.
Egqithileyo Umaleko we-8 webhodi yesekethe ye-OSP yokugqitywa kwePC efakwe ngaphakathi
Okulandelayo: Uluhlu oluphezulu lwe-12 tg i-FR4 PCB yeNkqubo eLungisiweyo